...उसैको ठूलो स्वर - परिहास - नेपाल
...उसैको ठूलो स्वर
सभामुख महोदय ! यो देशमा अब कतिसम्मको लापरवाही र गैरजिम्मेवारीपन बढिरहेको छ, त्यसतर्फ म यो गरिमामय संसद्को ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । कुरा यही संसद् सचिवालयको हो । हाम्रो संसद् सचिवालय कतिसम्म निकम्मा छ, हालै त्यसको प्रमाण भेटिएको छ सभामुख महोदय । यो संसद् सचिवालयले कसैलाई कुनै जानकारीसमेत नदिई आफूखुसी मेरो खातामा घरभाडाबापत भनेर मासिक पैसा हालिरहेको रहेछ । मेरो खातामा पैसा गइरहेको छ तर मलाई थाहा छैन । मलाई नै थाहा नदिई मेरो खातामा पैसा राख्ने अधिकार यो सचिवालयलाई कसले दियो ? घरभाडा भनेर मेरो खातामा पैसा गइरहेको सात महिना भइसक्यो तर म पूरै बेखबर छु । मेरो त आफ्नै घर छ । तर घर भएको मान्छेलाई समेत किन महिनैपिच्छे घरभाडा दिइयो सभामुख महोदय, म यसको जवाफ चाहन्छु । मलाई यसरी ६–६ महिनासम्म घरभाडा दिँदा राज्यको कोष कति दुरुपयोग भयो होला ? यसको हिसाबकिताब कसले राख्ने ?
सभामुख महोदय, काठमाडौँमा मेरो आफ्नै घर हुँदाहुँदै पनि मलाई जसले यो घरभाडा दिएको हो, त्यसलाई कारबाही होस् भनी माग गर्न चाहन्छु । यो संसद् सचिवालयको घोर अव्यवस्थापन हो । लगत राख्ने विधिको अस्तव्यस्तताको नमुना हो । यसको जिम्मेवार को ? यो अव्यवस्थापनका कारण लाखौँ रुपैयाँ अनियमित ढंगले बाहिर गइरहेको छ । यसमा जो जिम्मेवार भए पनि तुरुन्त कारबाही गरियोस् सभामुख महोदय । धन्यवाद !